Indawo ephezulu yokuThengiswa kweBhodi yePCB rhoqo ngePopper Pipe
Induction Ukuthengiswa kweBhodi yePCB ngeCopper
Icandelo: Ezonyango kunye namazinyo
imathiriyeli: Imibhobho yobhedu eluphahla, ibhodi yePBB
I-alloy: Ubushushu obunamaqondo aphantsi athengisayo
Izixhobo: Umatshini wokufakelwa ngesandla we-DW-UHF-6KW-III
ixesha: Sekunde ezi-8.
Ikhoyili: Umququzeleli owenziweyo wekhoyili
I-HLQ yaqhagamshelwa ngumvelisi ophambili wezixhobo zokuxilonga ezonyango ezabalazela ukuqhuba izinto ezintsha kubuchwepheshe beMagnetic Resonance Imaging (MRI).
Imibhobho yesicaba, ebonakaliswe kwesi sicelo sokufudumeza, isetyenziselwa ukuhambisa ubushushu ngomehluko wobushushu obuncinci okanye ukusasaza ubushushu kwindawo yonke.
yethu isisombululo sokufudumeza incedise umthengi ukuba asike ixesha lokuvelisa elalithathe iyure eli-1 ukuvelisa imibhobho yokufudumeza yobhedu eli-16.
I-DW-UHF-6kw-III ukunikezelwa kwamandla okushisa kunye nesikhululo sobushushu esenze ngempumelelo inkqubo yokuthengisa kwimizuzwana eli-8. Sikwasebenzise enye yeendlela zethu zokwenziwa ezenziwe senziwe ngonxweme ezihambisa isamente ukuqinisekisa ukuba ikhoyili ayizukufumana monakalo.
Ukwenza uvavanyo, sibeke imibhobho yobhedu kwiipads ezimbini ezifulethi ezinobushushu obunomgangatho ophantsi. Ukutshisa ukutshisa iqinisekisa ukuphindaphinda ngokupheleleyo. Kukho ukuncipha okukhulu kwixesha lomjikelo kunye nokunyuka kokusebenza ngoku njengoko iinxalenye ezininzi zingathengiswa ngaxeshanye.
iindidi Teknoloji tags Ibhodi ye-PC ye-HF ethengisayo, iPCB ethengisayo ephezulu, ukutyunjwa kokungena, umshini wokucoca, ukuqalisa ukuthengiswa pcb, indibano ethengiswa yeBPB yebhodi, Inkqubo ye-PCB yokuthengisa, ibhodi ye-PCB yokuthengisa, Inkqubo yebhodi ye-PCB ye-soldering Post yokukhangela